Wasaaradda Waxabarshada XFS oo soo gaba-gabeeysay Imtixaanka Shahaadiga ee Sanad-dugsiyeedka 2021-2022 – Radio Muqdisho
Wasaaradda Waxabarshada XFS oo soo gaba-gabeeysay Imtixaanka Shahaadiga ee Sanad-dugsiyeedka 2021-2022
Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta sare ee dalka ayaa maanta soo gaba-gabeysay Imtixaanka Shahaadiga ah ee Fasalada 12-aad oo si Siman loogu qaaday xarumaha waxbarashada ee maamulada dalka, kaasi oo ahaa mid mideysan oo dhamaan Dugsiyada Sare laga qaaday.
Imtixaanka oo galay sanadkii 8-aad oo xariir ayaa lagu kala galay magaalada Muqdisho iyo Gobolada dalka, iyada oo Wasaaraddu ku guuleystay in sanad dugsiyeedkaan 2021-2022 ay si nabad ah ugu soo gaba-gaboobeyso.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta sare Cabdullaahi Abukar oo soo xiray Imtixaanka ayaa yiri “ waxaa aan ku guuleysanay in sanadkaan uu Ixtiraanku si nabad ah inoogu soo gabagaboobo, waxaana uu ahaa mid ka duwanaa kuwii hore, waalidiinta dhalay ardada, waasadaha maamulada, ciidamada booliska iyo barayaashii ka qeyb qaatayne waa u mahadcelineynaa”.
Goobaha lagu galayey Imtixaanka ayaa waxa amniga xaqiijinayay Ciidamada Booliska Soomaaliyeed ,Sarakiisha ciidamada ay sheegen in inta Imtixaanku u socday aysan wax amniga lidi ku ah aysan dhicin.
Ardayda u fadhiistay sanadkaan Imtixaanka ayaa Wasaaradda Waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta sare sheegtay in ay gaarayeen 35,000 (Sodon iyo shan kun) oo Arday in ay gaarayeen, waxaana Wasaaraddu ay u rajeysay guul iyo natiija fiican oo ay ku baasaan.
Deni oo xaalada amniga kala hadlay saraakiisha ciidanka Puntland
Dhuusamareeeb oo lagu soo gaba gabeeyay shirka waxqabadka mashruuca CCCD